Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » 2022 Magaalooyinka ugu Deeqsisan Maraykanka
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • News • Dadka • Waajib ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Kooxda kubbadda koleyga ma aha waxa kaliya ee quduuska ah ee Magaalooyinka Mataanaha ah. Minneapolis iyo St. Paul, Minnesota, run ahaantii waxay xambaarsan yihiin macnaha "deris."
Markaan galeyno xilliga wax bixinta - u mahadcelinta iyo caawinta kuwa baahan - qaar badan oo naga mid ah ayaa shaqeyneynaa oo aan kasbaneynaa wax badan, laakiin masiibada ayaa sii wadata inay nolosha ka dhigto mid adag malaayiin Mareykan ah.
Dhab ahaantii, "ku dhawaad ​​20 milyan oo qaangaar ah ayaa ku nool guryo aan helin wax ku filan oo ay wax ku cunaan" iyo "12 milyan oo kireysteyaal waaweyn ah ayaa ka dambeeya kirada," sida ay qabto Xarunta Miisaaniyadda iyo Mudnaanta Siyaasadda.
Mahadsanid, dad badan oo Maraykan ah ayaa kor u qaadaya si ay u caawiyaan kuwa u baahan.
Laakiin waa maxay Magaalooyinka ugu Deeqsisan 2022?
Falanqeeyayaasha ayaa isbarbar dhigay 130 ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn Mareykanka 13 tilmaame oo muhiim ah oo ka mid ah dabeecadaha samafalka, laga soo bilaabo sadaqo bixinta ilaa heerka tabaruca ilaa tirada bangiyada cuntada - xitaa tirada shaqsiyaadka bedelay dhaqamadooda. Maktabad Bilaash Ah Oo Yar sanduuqa cuntada lagu wadaago ee deriska gaajaysan.
Hoos ka eeg 20ka magaalo oo qalbigooda iyo jeebkooda gasha kuwa ugu qoto dheer.
Magaalooyinka ugu Deeqsisan 2022
Dulucda iyo Hoosudhaca:
Mataanaha Ugu Naftooda Badan: Kooxda kubbadda koleyga ma aha waxa kaliya ee quduuska ah ee Magaalooyinka Mataanaha ah. Minneapolis iyo St. Paul, Minnesota, run ahaantii waxay xambaarsan yihiin macnaha "deris." Minneapolis waxa ay soo gashay kaalinta koowaad guud ahaan iyo qeybta deeqsinimada shaqsiyeed, halka St. Paul uu ku dhameystay meel aan ka fogeyn kaalinta toddobaad.
Ma aha oo kaliya dadka deggan magaalooyinkan kuwa ugu badan ee waqtigooda bixiya (labadaba lambar 1 ee heerka tabaruca), laakiin sidoo kale waxay hubiyaan inay u adeegaan xubnaha bulshada gaajaysan cunto kulul. Minneapolis waxay gashay kaalinta 6aad iyo St. Paul No. 8 xagga jikada maraqa. Waxa kale oo ay kala galeen lambar 3 iyo nambar 13, siday u kala horreeyaan, wadaaga sanduuqyada meelaha ay dadka maxalliga ahi u dejiyeen deriskooda cunto-yaraanta ah inta lagu jiro aafo.
Mister Rogers wuxuu lahaan lahaa maalin qurux badan xaafadahan.
Magaalooyinka Waaweyn, Baahiyaha Waaweyn:
Magaalooyinka waaweyn ayaa guud ahaan si fiican uga soo baxay qiimeynta marka loo eego magaalooyinka yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah.
Taasi waa sababta oo ah magaalooyinka waaweyn waxay u janjeeraan inay diirada saaraan sare u qaadida saameyntooda wadareed in ka badan tabarucaadkooda gaarka ah. Dhab ahaantii, saddexda magaalo ee Ameerika ugu weyn, New York, Chicago, iyo Los Angeles siday u kala horreeyaan, ayaa u maamulay cabbiraadaha Deeqsinimada Bulshada. Houston, San Francisco, iyo Washington, DC, ayaa iyaguna galay 10ka sare ee qaybtan.
Sinnaan la'aanta dhaqaale ee sii kordhaysa, magaalooyinkan waaweyni waxay muujinayaan in deeqsinimadu u janjeerto inay ka soo baxdo meelaha looga baahan yahay aadka loogu baahan yahay.
Florida Falls by Wayside:
Florida waxay u dirtay afar magaalo 10kayada hoose, oo ay ku jirto Hialeah oo ku jirta kaalinta ugu dambeysa guud ahaan. Jacksonville (No. 45) iyo Orlando (No. 58) ayaa ah labada magaalo ee Gobolka Sunshine kaliya ee kala jabiyay qaybta sare.
Qaybta Deeqsinimada Qofka, magaalooyin badan oo Florida ah ayaa ku xidhan kaalinta ugu dambeeya afar ka mid ah lixdii mitir oo kaliya ayaa ka baxsaday kaalinta ugu dambaysa ee labada kale. Waxqabadkooda Deeqsinimada Bulshada midna kama fiicna, sidoo kale. Tirada hoyga xayawaanka ayaa ahayd mitirka kaliya ee todobada wadarta guud taas oo magaalada Florida aysan ku jirin darajada 10-ka hoose ama aysan ku xirneyn booska ugu dambeeya.
Haddii aad ku dhacday waqtiyo adag, ha aadin magaalooyin badan oo Sunshine State ah oo raadinaya caawimo - laakiin ku kalsoonow asxaabtaada afarta lugood leh inay guri heli doonaan.